Umshini wephrinta we-Ceramic Tile China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-Ceramic Tile yokudayiswa,I-Price Ceramic Yomshini Wephrinta Yama-Ceramic,Abakhiqizi bephrinta ye-Ceramic Tile
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta yeCeramic > Umshini wephrinta we-Ceramic Tile
Umphakathi wanamuhla unesicelo esiphezulu mayelana nobuciko be-ceramic, ungasebenzisa lo Mshini wephrinta we-Ceramic Tile ngenani lokuncintisana ukuze wenze ubuciko bakho be-ceramic. Yeka ukuthi udonga olukhulu olududuzayo oludingayo, lungenza njengefomathi ngendlela oyifunayo. Ngesinqumo sokunyathelisa se-1440DIP, okwenza izimbumbulu zithande wena nje zingabathinta. amandla ongawakhetha, kungakhathaliseki ukuthi i-110V noma i-220V, i-Wall Inkjet Printer yethu ingashintsha ukuhlangabezana nemfuneko yakho.
Iphrinta ye-Ceramic Tile yokuthengisa uhlobo lwemishini ye-digital ye-"non-contact" ye-jet uhlobo lwe-digital, uhlelo lwayo lubanzi kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo zephrinta yethu ye- Ceramic Tile Imishini yamanani RF-A3UV:
2. bobumba isichuse Iphrinta Abakhiqizi kungaba efakwe nge Ukuphakama ngokuzenzakalela Inzwa, ukuvikela ukuphrinta ikhanda;
3. I- Ceramic Printer uk I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
I-Ceramic Tile Printer Inkjet Okuhle kakhulu: I-CISS ngaphandle kwenkinobho ye-ink + okushicilelwa kokushicilela okuphumayo + umphumela omuhle + womsebenzisi-friendly
Izigaba zomkhiqizo : Iphrinta ye-UV > Iphrinta yeCeramic
I-Ceramic Printing on Fabric Xhumana Nanje
I-Ceramic Tile Printer Inkjet Xhumana Nanje
Umshini wephrinta we-Ceramic Tile Xhumana Nanje
Inani lephrinta ye-Ceramic Tile Xhumana Nanje
Iphrinta ye-A3 EPSON Ceramic Xhumana Nanje
Iphrinta ye-Creamam Mugs Xhumana Nanje
Ukuphrinta kwe-Inkjet ecacile ye-Ceramic Xhumana Nanje
Iphrinta ye-RFC Tile Sublimation Xhumana Nanje
Iphrinta ye-Ceramic Tile yokudayiswa I-Price Ceramic Yomshini Wephrinta Yama-Ceramic Abakhiqizi bephrinta ye-Ceramic Tile Iphrinta ye-Cake yokudayiswa Iphrinta ye-Latte yokudayiswa Iphrinta ye-Ceramic Tile Digital Iphrinta yephrinta yokudayiswa Iphrinta yeCeramic Price India